Inona no ilana menaka manitra erythromycin ophthalmic? - BALLYA
Posted on Janoary 9, 2021, Nataon'i Jason, Sokajy antibiotika
Inona ny menaka manitra erythromycin ophthalmic?
Molotra maina sy mandeha rà
Mena ao anaty vala-jaza
Erythromycin ophthalmic fanosotra VS menaka erythromycine
Erythromycine menaka ophthalmic dia aseho ho an'ny trachoma, conjunctivitis, blepharitis ary otrikaretina ivelany. Ity vokatra ity dia misy erythromycin 5 mg isaky ny grama. Ny mpandray azy dia: petrolatum mavo, paraffin misy rano. Ity vokatra ity dia menaka manitra fotsy hatramin'ny mavo, izay fanafody ophthalmic over-the-counter.
Rehefa mampiasa azy dia apetaho amin'ny hodi-maso, 2 hatramin'ny in-3 isan'andro, ny fotoana farany tokony hampiasaina alohan'ny hatory. Ny fiatraikany ratsy dia misy fanaintainana amin'ny maso indraindray, fiovan'ny fahitana, mena mena na fahasosorana ary fanehoan-kevitra mahazaka hafa. Ny vokatry ny fanafody amin'ny menaka maso eritromazyzy dia ny erythromycin dia karazana antibiotika macrolide, ary erythromycine fanatanterahana asa dia ny fanakanana ny synthesis proteinina amin'ny bakteria, ary misy fiatraikany amin'ny bakteria amin'ny bakteria miabo tsara sy Chlamydia trachomatis.
Raha misotro ronono any an-trano ianao, BALLYA afaka manao an fitsapana erythromycine mba hampahafantaro anao raha misy reside erythromycine amin'ny ronono sotroinao ao anatin'ny 10min.
Ny tena anjara asan'ny erythromycine dia ny fitsaboana ny areti-maso, toy ny trachoma, conjunctivitis, keratitis ary areti-maso avy any ivelany. Faharoa, manasitrana ny molotra vaky izy, ary afaka manamaivana ny soritr'aretin'ny orona, mitrandraka ny vongan-drongony sy ny lokon'ny mena vao teraka. Ny menaka maso erythromisinzy dia fanafody tsara sy mora vidy azo tazomina ao an-trano.
1. Aretina maso
Tokony ho fantatry ny rehetra fanosotra erythromycine ophthalmic. Tamin'ny 2010, dia nipoaka ny aretin'ny maso mavokely nanerana ny firenena. Ny areti-maso mavokely dia conjunctivitis maranitra. Tamin'izany fotoana izany, fanosotra erythromycine ophthalmic dia fitsaboana fisorohana matetika. Ireo akora fototra ao aminy dia ny jelly petrolika sy erythromycine. Anisan'izany, ary erythromycine dia misy fiantraikany amin'ny fanamainana sy ny fisorohana ny aretina amin'ny ratra, raha ny jelly solika kosa dia afaka mamorona sosona mitokana amin'ny velaran'ny ratra, izay afaka mampiroborobo ny fitomboan'ny sela ary manasitrana ny ratra, ary manakana ny fiakanjoana tsy hifaneraserana amin'ny dity ratra.
2. Molotra maina sy mandeha rà
Ny tena asan'ny menaka maso erythromycine dia ny fitsaboana ny areti-maso, toy ny trachoma, conjunctivitis, keratitis, ary areti-maso avy any ivelany. Ny faharoa dia ny fitsaboana ny molotra vaky. Menaka fanosotra erythromisinzy misy jelly solika, paraffin misy rano ary akora fanosotra hafa. AMPIHARO fanosotra erythromycine ophthalmic ho an'ny molotra vaky maraina ary alohan'ny hatory, ary avy eo dia ho sitrana aorian'ny in-2-3. Tsotra izy io, madio ary tsy misy fahatsapana solila menaka, ary ny vokany dia haingana sy miharihary kokoa noho ny menaka paraffin.
Misy taova eo ambonin'ny molotra, ary matetika ny rà dia hita eo ambanin'ny rivotra maina sy mangatsiaka amin'ny fararano sy ririnina, dia ny orona izany. Ny fandehanan-nify dia iray amin'ireo aretina mahazatra amin'ny olona maoderina. Ny fomba fiaina tsy mahasalama, ny fahasosorana amin'ny rivotra maina sns ... mety hiteraka vavorona. Vaseline ao menaka maso eritromazyzy afaka mitazona ny mukosa orona amin'ny hamandoana iray mba hisorohana ny vaky lalan-drà vokatry ny etona amin'ny hamandoana sy ny vasodilation. mampihatra fanosotra erythromycine ophthalmic ho ambonin`ny fery mucosal nasal dia afaka mampiroborobo ny fanasitranana ambonin`ny fery sy hisorohana ny aretina mikraoba. Na izany aza, marihina fa ny fanosotra erythromycine ophthalmic tsy maintsy ampiasaina aorian'ny fijanonan'ny rà.
Menaka fanosotra erythromycine afaka mitsabo rhinitis. Rehefa avy mirehitra ny lava-orona dia hisy fanaintainana eo an-toerana sy fahatsapana mafana. Ampiharo ny habetsaky ny menaka maso eritromazyzy mankany amin'ny faritra misy fanaintainana miharihary. Aorian'ny fitsaharana amin'ny alina dia hihatsara tsimoramora ireo soritr'aretin'ny rhinitis. Raha maharary eo an-toerana ny lava-orona, miaraka amina rano mavo sy foza, dia mety vokatry ny eczema orona. Azonao atao koa ny manampy vola kely dexamethasone ny menaka erythromycine ary ampiharo.
4. Fissure anal
Menaka fanosotra erythromycine ophthalmic dia afaka mitsabo ny fisitahana anal, izay iray amin'ireo aretina mahazatra ao amin'ny departemanta anorectal. Ny tanora indrindra no voan'io aretina io, vehivavy betsaka kokoa noho ny lehilahy. Satria mahatsapa fanaintainana ny marary mandritra ny fahalavoana ary tsy te-hiaona, dia mora ny mitahiry ny fahamainana sy ny fahamainana, mamorona faribolana ratsy. Ny menaka fanafody sinoa nentim-paharazana dia matetika ampiasaina amin'ny fampiasana ivelany, fa ny vokany manohitra ny inflammatoire dia tena mahantra, ary ny fitsaboana amin'ny fandidiana dia lafo sy mora miverina.
Menaka fanosotra erythromycine mora vidy sy mora ampiasaina, indrindra ny akora ao anatiny misy asidra lactobionic, erythromycin, petrolatum mavo ary paraffin misy rano. Tsy mampihena ny fivontosana fotsiny izany, fa afaka manosotra ny hoditra manify sy ny hoditra, ary mampiroborobo ny fanasitranana ny ratra. Mandritra izany fotoana izany dia tsy misy ny fiatraikany ratsy. Ny fampiasana dia ny fandroana amin'ny rano mafana indroa isan'andro, ary avy eo mandro indray mandeha aorian'ny fandosehana. AMPIHARO menaka maso eritromazyzy amin'ny faritra perianal. Aorian'ny fampiharana, manaova hetsika levator.
5. Mena ao anaty vala-jaza
Menaka fanosotra erythromycine afaka ihany koa mitsabo ny mena ao anaty vala-jaza. Miaraka amin'ny fanatsarana ny fari-piainana, zaza maro no lasa matavy. Rehefa avy matavy loatra ny zazakely dia mora ketrona amin'ny hatok'izy ireo. Raha tsy voatsabo ara-potoana izy ireo dia mety hanjary areti-mandringana sy fikafana faharoa. Amin'izao fotoana izao dia azonao atao ny mampihatra habetsaky ny menaka maso eritromazyzy amin'ny mena ao anaty vatan-jaza, ary tsy ho ela dia sitrana izy io.
6. Mena mena
Ny vokatra mahazatra iray hafa an'ny fanosotra erythromycine ophthalmic dia ny hitsaboana ny mena-tratran'ny hipoka. Noho ny habetsahan'ny mponina any Shina dia maro ny zaza vao teraka teraka isan-taona. Ny zaza vao teraka dia manana hoditra marefo, ketrona bebe kokoa, ary mivoaka matetika. Raha tsy manasa ny vodin'izy ireo amin'ny rano ianao rehefa avy any amin'ny trano fidiovana, ary tsy mahasalama ny rivotra ny diaper, dia hanentana ny hoditry ny vodin-jazakelinao izany ary hiteraka mena mena. Ny mena vody dia mety hiteraka fahasimban'ny hoditra eo an-toerana. Taloha, ny fampiasana menaka manitra menaka atiny hanisy menaka ny vody dia tsy misy vokany afa-tsy ny menaka manitra, fa tsy misy vokany manohitra ny bakteria sy ny anti-inflammatoire. Matetika izy io dia mivoatra hatrany amin'ny fivontosana mena, hatramin'ny fivontosana vody, ary hatramin'ny otrikaretina bakteria ka hatramin'ny sepsis aza. Noho izany dia tokony horaisina avy hatrany ny fepetra mahomby raha hita ny mena mena.
Ny erythromycin ao amin'ny menaka maso eritromazyzy dia antibiotika misy vokarin'ny bakteria sy anti-inflammatoire. Ny vaseline sy paraffin-dronono dia misy vokany fanosorana, izay afaka misoroka tsara ny diky tsy hanelingelina ny hoditry ny zaza. Raha manana valahana mena ny zanakao dia aza hadino ny mijery ny fanadiovana ny vodin-jaza, ary ampiasao menaka maso erythromycine hanasitranana tanteraka ny valahana mena. Mandritra izany fotoana izany dia tsotra sy mora ianarana ity fomba ity. Raha misy soritr'aretin'ny voditra mena ny zaza ao an-trano dia azonao atao ny mitandrina azy io nefa tsy mila mankany amin'ny hopitaly. Tena fomba tsara hifehezana reny vaovao izany.
7. Manaikitra moka
Erythromycine menaka ophthalmic ary misy vokany eo amin'ny fisorohana ny aretina aorian'ny kaikitry ny moka. Satria somary marefo ny hoditry ny zazakely, rehefa avy voakaikitry ny moka, dia mety hiseho ny mena eo an-toerana, ny fivontosana ary ny mangidihidy. Amin'izao fotoana izao, raha mampihatra erythromycine amin'ny faritra voakaikitry ny moka ianao, dia hanjavona tsikelikely ireo vongan-tany.
Menaka fanosotra erythromycine azo ampiasaina amin'ny fitsaboana onychomycosis. Alohan'ny hampiasana azy dia sasao amin'ny rano mafana ny tongotrao. Ny tsara indrindra dia alemana mandritra ny fotoana kelikely, avy eo atsofohy ny rantsan-tongotrao. Makà menaka fanosotra erythromycine mety sy mety tsara ary afangaro ao anaty paty ary apetaho amin'ilay faritra misy onychomycosis, avy eo fonosina lamba madio ny tongotrao, isan'andro. Aorian'ny fotoana fitsaboana mitohy dia hihatsara tsikelikely ny onychomycosis.
Ny menaka maso erythromycine dia mety hampitombo ny volomaso koa. Raha mijaly amin'ny conjunctivitis ianao na mitafy ny masom-baravarana faharoa dia mampiasa menaka fanosotra erythromycine matetika, tsy hoe afaka mifehy ny fivontosan'ny masonao fotsiny, fa mampaharitra kokoa ny volomaso.
Ny faniriana hijery manintona dia iraisan'ny rehetra. Mba hahatonga azy ireo ho tsara tarehy kokoa sy kanto kokoa, zatovovavy maro no mankany amin'ny fivarotana amoron-dalana sy fivarotana kely hanindrona ny sofiny. Fa raha tsy azo antoka ny fepetra famonoana otrikaretina dia mora voan'ny aretina izy ireo. Asio menaka erythromycine amin'ny fanjaitra mialoha, mba hahafahanao misoroka ny aretina amin'ny loaka.
Erythromycin dia ao anatin'ireto zava-mahadomelina roa ireto. SY erythrocin, Mitovy amin'ny macrolide antibiotika, misy fiantraikany amin'ny bakteria amin'ny bakteria Gram-positive sy Chlamydia trachomatis.
Ny tena maha samy hafa ny zava-mahadomelina roa dia ny tsy fitovian'ny erythromycine. Ny fatran'ny erythromycine an'ny menaka erythromycine dia 1%, raha ny fatran'ny erythromycine an'ny erythromycine menaka ophthalmic dia 0.5%, ary ny vokatry ny bakteria ny menaka erythromycine dia tsara kokoa noho ny erythromycine menaka ophthalmic.
Ny fahasamihafana faharoa dia ny mpandray. Ny mpiorina amin'ny menaka erythromycine dia paraffin ranoka sy petrolatum fotsy, raha paraffin ranoka sy petrolatum mavo ao erythromycine menaka ophthalmic. Ny petrolatum fotsy dia petrolatum mavo izay nofafana tanteraka na tamin'ny ampahany, izay mahasosotra kokoa noho ny petrolatum mavo.
Ny menaka erythromycine dia an'ny fanomanana ny hoditra, raha erythromycine menaka ophthalmic an'ny fanomanana ny maso.
Ny Farmacopoeia ao amin'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina dia manana fitakiana kalitao tena samihafa amin'ny fanomanana roa ireo. SATRIA menaka maso eritromazyzy dia mety amin'ny maso, manana fepetra ambony kokoa amin'ny bakteria, sanda PH ary lafin-javatra hafa. Ny menaka erythromycine dia azo antoka fa tsy mahasolo ny menaka erythromycine. Raha tsy izany dia mety hiteraka areti-maso mahery vaika izany.
Ka rehefa tsy mahazo aina ny masonao dia mila mitandrina ianao ary aza atao menaka manitra rehefa mila mihosotra menaka. Ankoatr'izay, dia tokony homarihina fa amin'ny fanomanana fitsaboana maso dia azo ampiasaina hatramin'ny 4 herinandro aorian'ny fampandehanana azy, raha tsy izany dia hiteraka tsy fahazoana aina noho ny bakteria be loatra.
Nilaza ny dokotera fa ny menaka maso erythromycine dia misy fiatraikany tsara amin'ny aretin-koditra, cheilitis angular, mimari-nify, ratra kely, may kely ary ny kaikitry ny moka.
Fa tokony homarihina fa ny menaka maso erythromycine dia tsy mandaitra ho an'ny holatra. Ny marary manana rhinitis areti-mifindra dia afaka manosotra menaka erythromycine araky ny baikon'ny dokotera, izay afaka mitarika vokadratsin'ny fanoherana ny aretina. Na izany aza, tsy tokony hampiasaina ianao erythromycine menaka ophthalmic ho an'ny rhinitis mahazaka sy manaparitaka, izay tsy mahomby fotsiny, fa mampitombo ihany koa ny mety ho voka-dratsy. Ny vehivavy mararin'ny mastitis mandritra ny fampinonoana dia tsy tokony hampiasa erythromycine, hisorohana ny fidiran'ny zava-mahadomelina amin'ny vatan'ny zaza amin'ny alàlan'ny rononon-dreny ary hisy fiantraikany amin'ny fitomboany sy ny fivoarany ara-dalàna. Indraindray dia mety hisy ny fiatraikany ratsy, toy ny fahatsapana firehetana eo an-toerana, ny fahamainana, ny mangidihidy, ny eritema ary ny fanehoankevitra urticaria indraindray. Raha misy ny fiatraikany ratsy voalaza etsy ambony dia tokony hajanona avy hatrany ny fanafody.
Raha misy fahatsapana mirehitra, mangidihidy, mena ary mamontsina eo amin'ny toeram-panafody, tokony hatsahatra ny fanafody, ary tokony hosasana ny fanafody eo an-toerana, ary manatona dokotera raha ilaina izany.
Manasa tanana alohan'ny hampiasana azy.
Ny vehivavy bevohoka sy mampinono dia tokony hampiasa izany eo ambany fitarihan'ny dokotera.
Hamafiso ny satrony aorian'ny fampiasana azy mba tsy ho voaloto ilay fanafody.
Ny olona tsy mahazaka an'ity vokatra ity dia tokony hitandrina azy io.
Fady ny mampiasa an'io vokatra io rehefa miova ny fananany.
Azafady mba tsy ho azon'ny ankizy azafady ity fanafody ity.
Ny ankizy dia tsy maintsy ampiasaina eo ambany fanaraha-mason'ny olon-dehibe.
Raha mampiasa fanafody hafa miaraka amin'izay ianao dia miangavy anao hijery dokotera na farmasinao alohan'ny hampiasanao ity vokatra ity.
Erythromycine menaka ophthalmic dia misy fiatraikany tsara amin'ny aretina madinidinika maro sy aretina, ary mora sy mora ampiasaina izy io. Fa mila mitandrina kosa ianao amin'ny fitandremana sy ny fiatraikany ratsy alohan'ny hampiasana azy.